Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu
Ikhaya > Imikhiqizo > Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu
(Yonke imikhiqizo engu-24 ye-Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu)
I-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. ingenye yezinto ezine-Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu ezihola phambili e-China. Yimboni & umphakeli onguchwepheshe wokwenza Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu. Nikeza ikhwalithi ephezulu Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu ngentengo ephansi eshibhile.
Hlanza umbhede ohlangene kathathu ngekhanda le-tube round
I-Model No.: CL-HB0024
Tag: Isibhedlela Sishaya Ubhedu obunamathebhu amathathu , Spray Medical Split-Triding Bed , I-Stainless Steel Spray Bed-Triding Bed
Igama lomkhiqizo: Hlanganisa umbhede ohlangene kathathu nekhanda le-tube nxazonke Into: CL-HB0024 Imininingwane: Usayizi womkhiqizo: 202 * 90 * 50cm. Okubalulekile: Ibhodi lombhede eyenziwe ngeshidi elibanjwe abandayo, uhlaka olwenziwe nge-tube...
Hlanganisa umbhede ohlanganyelwe kathathu ngonyawo we-tube
I-Model No.: CL-HB0023
Igama lomkhiqizo: Hlanganisa umbhede omathathu wokubuthwa ngezinyawo zamathambo nxazonke Into: CL-HB0023 Imininingwane: Usayizi womkhiqizo: 202 * 90 * 50cm. Okubalulekile: Ibhodi lombhede eyenziwe ngeshidi elibanjwe abandayo, uhlaka olwenziwe...
Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu ukuthengiswa okuvela ku-China, Ukuthengiswa Okuqondile kusuka kubakhiqizi beChina abaholayo emanani entengo eshibhile. Thola imikhiqizo engu-Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu eningi ku-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. futhi uthole izinga eliphakeme le-Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu ngokuqondile kusuka ku-Isibhedlela Sishaya Ubhedu Obunamathebhu Amathathu abathengisa abathengi nabathengisi abathembekile. Thumela izidingo zakho zokuthenga & Thola impendulo ngokushesha.